Usizo lwe-Twitter lungayithola kanjani amaKlayenti amaningi? - I-Semalt inikeza impendulo
i-Twitter ingaletha iwebhusayithi kumakhasimende amaningi. Kubantu be-webmasters abhekisana ne-Social Media Marketing (SMM), ungenza imizamo eminingi engenza noma ayibeke izithelo. Andrew Dyhan, Semalt iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende, unikeza ukucabangela izindlela ezilandelayo lapho i-Twitter ingenza umkhankaso wakho we-SEO uphumelele:
Qinisekisa izithombe, namavidiyo avele. Uma wenza i-SEO, izithombe kanye nokuqukethwe kwevidyo kufaka isandla njengezici zesimo. Kulesi simo, kunezindlela eziningi abantu abasebenzisana ngazo nokuqukethwe kwakho - senha outlook 2010. Ngaphezu kwalokho, izithombe zingakusiza wenze u-UX wesayithi lakho likhangise.
Thola imiphumela efanele yokusesha. Ukuhlaziywa kwe-metrics efanelekile kungaletha iwebhusayithi yakho phambili esikhathini esifanayo okwenza imali eningi. Ungasebenzisa imiphumela yosesho ukwenza i-Twitter ifake amaklayenti kuwebhusayithi yakho.
Okuqukethwe kwekhwalithi nokukhuluma. Ngezinye izikhathi, ukukhuluma okuthandwa ngabantu kanye namazwana. Kulokhu, abantu bangase bakhohlwe ukusebenzisa lesi sici lapho benza i-SEO yenkampani. Kungenzeka kube nezinye izindawo zebhulogi eziletha abantu abaningi kuwebhusayithi yakho. I-Twitter ingakusiza ukuba wenze lezi zinto ngokuzenzakalelayo kanye nokwenza lezi zakhi zisebenze ndawonye.
Bamba imincintiswano. Ukwenza imidlalo ku-Twitter kungasiza abantu ukuba balethe izici eziningi zokudala izikhangisi..Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukubandakanya izethameli zakho ngokusebenzisa i-Twitter elandelayo. I-Twitter iyithuluzi elinamandla lokuthengisa okumele wonke ama-webmaster aqashe.
Sebenzisa ibhulogi. Amandla ebhulogi namanje akhona emkhakheni wokuthengisa we-intanethi. Ukusebenzisa ibhulogi eligunyazayo kungenza abantu bazwele ngolwazi abazama ukukudlulisela kanye nokwenza izinguquko ezidingekayo ukwenza umkhankaso wakho wesikhangiso uphumelele. Ungakwazi ukuxhumanisa ibhulogi yakho ku-Twitter ngezinzuzo eziphezulu.
Phendula izethameli ezilungile. E-Twitter, abantu abaningi bangabika ama-tweets akho ngezizathu ezihlukahlukene. Ungawabeka laba bantu ngokunganaki imibono yabantu abangakulungeli ukuba amaklayenti akho. Ngaphezu kwalokho, i-blog ingakwazi ukuletha abalandeli bakho be-Twitter ekukhanyeni okukhulu kwabantu abazimisele ukuguqula amakhasimende.
I-Retweet ngokuphumelelayo. I-Retweeting ibonakala iyindlela elula yokusebenzisa i-Twitter ukuze ibeke amazwana. Abantu babuyisa ama-tweets kwamanye ama-akhawunti ukuze benze abalandeli babo babone lolo lwazi oluthile. Kubasebenzisi abafuna ukwenza izinguquko ezidingekayo emikhankaso yabo yesikhangiso, kubalulekile ukucuketfwe okuqukethwe okuvela emthonjeni othembekile, ukwenza yonke inqubo iyingqayizivele.
Okwamanje, abantu abaningi bavame ukusebenzisa i-Twitter ukuze badlulisele imisebenzi enkulu ye-SEO kanye yokumaketha okuqukethwe . Kwezinye izimo, abantu basebenzisa inqubo yokukhangisa ukuze bafinyelele izigidi zamaklayenti kuwo wonke umhlaba. Iningi lazo olusiza ekwenzeni imikhankaso emikhangiso emikhulu. Kunezinye izindlela ezisiza abakwa-webmasters ukuthi bafinyelele izilaleli zabo ezibhekiswe kuzo. Ungasebenzisa le mhlahlandlela ukwenza umkhankaso wakho we-SEO noma we-SMM uphumelele. Ngaphezu kwalokho, i-Twitter ingasiza izikhangiso zakho zenze amaklayenti amaningi kuwebhusayithi yakho.